anti-အဝလွန်ခြင်းအမှုန့်: Orlistat အမှုန့် vs Cetilistat အမှုန့် | AASraw
/ဘ‌‌လော့ခ်/cetilistat , Orlistat/anti-အဝလွန်ခြင်းအမှုန့်: Orlistat အမှုန့် vs Cetilistat အမှုန့်
အပေါ် Posted 04 / 12 / 2018 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် cetilistat, Orlistat.
Orlistat အမှုန့် vs Cetilistat အမှုန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကို
9.Cetilistat အမှုန့် သာ. ကောင်း၏သည်းခံစိတ်သန်း Orlistat အမှုန့်
အွန်လိုင်း 10.Buy Anti-အဝလွန်ခြင်းအမှုန့်
Cetilistat (Oblean) အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
I.Cetilistat (Oblean) အမှုန့်ကိုအခြေခံဇာတ်ကောင်:
အမည်: Cetilistat (Oblean) အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 190-200 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
အရောင်: မီးခိုးရောင် Powder
1 ။ Cetilistat အမှုန့်
Cetilistat အမှုန့် ပန်ကရိယ lipase တစ်ခု inhibitor, အူထဲမှာ triglyceride ဆင်းချိုးထားတဲ့အင်ဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအင်ဇိုင်းမရှိရင်အစားအသောက်များတွင်ထံမှ triglyceride ကိုစုပ်ယူအခမဲ့ဖက်တီးအက်ဆစ်သို့ hydrolyzed ခံရခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ကြသည်နှင့် undigested ပြန်ထွက်သွားသည်ခံရဖို့ထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေး, လက်ရှိ FDA က-approved မူးယစ်ဆေး Orlistat အမှုန့်မှုန့်ဆင်တူနေစဉ်အတွင်းတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောမော်လီကျူးတည်ဆောက်ပုံကြောင့်ပိုပြီးခံသာဘေးထွက်သက်ရောက်မှုပရိုဖိုင်းရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကအဆင့်2ရုံးတင်စစ်ဆေးနေတဲ့ 612-ရက်သတ္တပတ်ကုသမှုကာလအတွင်းကီလိုဂရမ် / m28 45 မှ2တစ် BMI နှင့်အတူ 12 အဝလွန်, ဆီးချိုဘာသာရပ်များလေ့လာခဲ့သည်။ Cetilistat အမှုန့် 80 နှင့် 120 မီလီဂရမ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ (3.85 ကီလိုဂရမ်နှင့် 4.32 ကီလိုဂရမ် vs. 2.86 ကီလိုဂရမ်အသီးသီး) နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်သိသိသာသာကိုယ်အလေးချိန်ရာထူးတိုး။ Cetilistat အမှုန့်-သွေးဆောင်ကိုယ်အလေးချိန် Orlistat အမှုန့်မှုန့် (3.78 ကီလိုဂရမ်) နှင့်အတူအောင်မြင်အလေးချိန်အရှုံးဆင်တူခဲ့သည်။ Cetilistat အမှုန့်မှုန့်ကောင်းကောင်းဒဏ်ခံခဲ့မှုကြောင့်ဆိုးရွားသောယင်းရလဒ်များအရအိပ်ယာထက်ဖြစ်ရပ်များနှင့် Orlistat အမှုန့်အုပ်စုများမှနည်းပါးလာမှရပ်စဲပြသခဲ့သည်။ Cetilistat အမှုန့်မှုန့်နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုများ mg နှင့်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များမှလုံးဝကြောင့်ခဲ့ Orlistat အမှုန့်အုပ်စုတွင်ပြတ်တောက်သည့် 120 ထက်သိသိသာသာဆိုးရွားခဲ့ကြောင်းပေးထား, Cetilistat အမှုန့်အလေးချိန်အရှုံးရရှိများအတွက်ဦးစားပေး lipase inhibitor ဖြစ်လာပေမည်။ Cetilistat အမှုန့်မှုန့်အဆင့်3စမ်းသပ်မှုတွေဂျပန်တွင်တိုးတက်မှုအတွက်လက်ရှိဖြစ်ကြသည်။
2 ။ Orlistat အမှုန့်မှုန့်
Orlistat အမှုန့်မှုန့်ပန်ကရိယနှင့်အစာအိမ် lipase ဟန့်တားသဖြင့် 30% အားဖြင့်အစားအသောက်အဆီစုပ်ယူမှုကိုတားဆီး inhibitor တစ်အစွမ်းထက်နှင့် Reversible လုပ်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်း lipase ဖြစ်ပါတယ်။ Orlistat အမှုန့် 1998 အတွက်အတည်ပြုခြင်းနှင့်လက်ရှိအဝလွန်ခြင်း၏ရေရှည်စီမံခန့်ခွဲမှုများအတွက်သာရရှိနိုင်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထိုး 120 နေ့စဉ်ဆေးတောင့်3ကြိမ် mg နှင့်တစ်နှစ်ခွဲထိုး (60 မီလီဂရမ်) သည်အမေရိကန်အပါအဝင်နိုင်ငံအချို့အတွက် Over-the-counter ဦး၏ထိရောက်မှုရရှိနိုင်ပါသည် အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် Orlistat အမှုန့် အဝလွန်ခြင်း၏ရေရှည်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အများအပြား RCTs (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်4နှစ်) အစီရင်ခံခဲ့သည်။ 12 နှင့် 15 စမ်းသပ်မှုတွေ၏ Meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်ကြောင့် Orlistat အမှုန့်ဖို့ကိုယ်အလေးချိန်အတွက်ယုတ်ခြားနားချက်ကီလိုဂရမ် -2.59 မှ 95 လနှင့် -3.46 ကီလိုဂရမ် (-1.74 မှာ (ကီလိုဂရမ် -6 မှ 2.9% CI, -3.2) -2.5 ကီလိုဂရမ်ခဲ့သည် ) ကရလဒ်များအရအိပ်ယာထက်ပိုသော 12 လအတွင်းမှာ။ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ပေါ်အကျိုးရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုခါးလုံးပတ်, သွေးဖိအား, သွေးဂလူးကို့စအဆင့်ဆင့်နှင့် lipid profile များကိုအပါအဝင်အများအပြား cardiometabolic parameters တွေကို, တိုးတက်စေရန်လုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ 15 လအတွင်းအနည်းဆုံး 10,995 များအတွက် Orlistat အမှုန့်မှုန့်သို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနဲ့ကုသသူခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်6သင်တန်းသားများ၏ 12 လေ့လာမှုများပါဝင်သည့်အရာတစ်ဦး Meta-analysis သည်အတွက်, Orlistat အမှုန့်နှင့်အတူကုသမှုသောအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ညှိနှိုင်းမှုအပြီးစုစုပေါင်းလက်စထရောအတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် Orlistat အမှုန့်အဝလွန်လူနာအတွက်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအန္တရာယ်အချက် profile များကိုတိုးတက်အောင်များအတွက်အသုံးဝင်သောတွဲဖက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဖော်ပြသည်။ တစ်ပိုရှည်2နှစ်ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်း, Orlistat အမှုန့်ကိုလည်း% (9.0% CI, 6.2 မှ 0.63 HR, 95) 0.46 မှ 0.86% ကနေအမျိုးအစား4ဆီးချိုရောဂါ၏ဖြစ်ပွားမှုလျှော့ချ။
24 ပတ် Orlistat အမှုန့်ကိုလက်ခံရရှိကိုရီးယားအဝလွန်လူနာများအနက်အခြေခံကနေယုတ်အလေးချိန်ပြောင်းလဲမှု -2.8 ကီလိုဂရမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Orlistat အမှုန့်နှင့်အတူကုသမှုလည်းအများအပြားဇီဝဖြစ်စဉ် parameters တွေကိုတိုးတက်လာသည်။ များသောထိန်းချုပ်မှုသိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများ (HbA1c, -0.87%; P ကို ​​<0.01) ရှိခဲ့သည်, အင်ဆူလင်အစာရှောင်, စုစုပေါင်းလက်စထရော, LDL-C ကို (P <0.001), ခါးလုံးပတ် (-5.48 ± 0.54 စင်တီမီတာ, P ကို ​​<0.001), နှလုံးကျုံ့အသွေးသည် လေးနက်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲဖိအားနဲ့ diastolic သွေးဖိအား (P = 0.000) ။
Orlistat အမှုန့်များ၏အသုံးအများဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဝမ်းလျှော, fecal incontinence ဝမ်း, အဆီပြန်အစက်အပြောက်, လေ, ဖောင်းနှင့် dyspepsia ပါဝင်သည်။ အဆိုပါဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများ၏ရလဒ်အဖြစ်, Orlistat အမှုန့်ကိုကောင်းစွာဒဏ်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအစောပိုင်းဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပြီးလူနာအဆီကြွယ်ဝသောအစားအစာကိုရှောင်ရှားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူအဖြစ်လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
မကြာသေးမီကလေးနက်အသည်းဒဏ်ရာအတိတ် 10 နှစ်အတွင်းသတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 1999 နှင့် 2008 အကြား, အမေရိကန် FDA ကတစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ဆောင်ရွက်ရန်ဖို့အမေရိကန် FDA ကသတိပေးခံရရာ Orlistat အမှုန့်မှုန့်ကိုသုံးပြီးလူနာအတွက်အသည်းပျက်ကွက်၏ 32 ဖြစ်ပွားမှုအပါအဝင်ပြင်းထန်သောအသည်းဒဏ်ရာ6အစီရင်ခံစာများလက်ခံရရှိ Orlistat အမှုန့်ရဲ့ကုသမှု ဘေးကင်းလုံခြုံမှု။ အဆိုပါသုံးသပ်ချက်ကို Xenical သို့မဟုတ်မဟာမိတ်များကိုသုံးခဲ့သောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခန့်မှန်းခြေ 13 လူဦးရေသန်းထဲကဧပြီလ 1999 နှင့်သြဂုတ်လ 2009 အကြားသတင်းပေးပို့ပြင်းထန်အသည်းဒဏ်ရာ 40 ဖြစ်ပွားမှုစုစုပေါင်းများကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ အမေရိကန် FDA ကပြင်းထန်အသည်းဒဏ်ရာရှားပါးခဲ့သောကွောငျ့, သြဂုတ်လ 2009 အတွက် Orlistat အမှုန့်များ၏ဆေးညွှန်းကိုဆက်လက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများအကြံပေးခဲ့သည်။ သို့သော်မေလ 2010 အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်အသည်းဒဏ်ရာ၏လက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်. အများပြည်သူပညာပေးဖို့တံဆိပ်တည်းဖြတ်မူနှင့်ပြင်းထန်သောအသည်းဒဏ်ရာတစ်ခုသတိပေး၏ထို့အပြင်မှဦးဆောင်ခဲ့သည်။
3 ။ Cetilistat အမှုန့်သောက်သုံးသော
Cetislim (Cetilistat အမှုန့်) အမှုန့်နှုတ်အုပ်ချုပ်မှုများအတွက် 60mg ခှနျအားဗလတောင်အဖြစ်ပေးအပ်သည်။ အဆိုပါဆေးဝါးအစားအသောက်များတွင်ကနေအဆီစုပ်ယူမှုကိုထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်ဒါအစားအစာ, ကြေညက်နေစဉ်ကအလုပ်လုပ်နိုင်စေရန်အစားအစာများနှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားသည်။ သင့်ရဲ့ဆရာဝန်တစ်ဦးချင်းစီထိုးအဖြစ်လိုအပ်သောနေ့စဉ်သောက်သုံးသောနှင့်အတူယူမည်မျှဆေးဝါးပေါ်တွင်သင်အကြံပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင်တို့သည်ဤညွှန်ကြားချက်လိုက်နာအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သင့်ရဲ့ဆရာဝန်ယူသင့်ကိုပြောပြမှာထက်ပိုမယူပါနှင့်။
Cetislim တောင့ 60 မီလီဂရမ်ခွန်အား၌ပူဇော်ကြသည်။ ဆေးထိုးအသီးအသီးမုန့်ညက်တဆေးတောင့်ယူရန်ဖြစ်ပါသည်။ အစားအစာများကိုကျော်သွားမပြုပါနှင့်သတ်မှတ်ထားသောထက်ဆေးပိုမိုယူကြဘူး။ ရိုက်ယူခြင်း cetilisat အစားအစာနှင့်အတူသင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့စုပ်ယူခံရခြင်းမှကိုစားသောအရာကိုအနေဖြင့်အဆီပိတ်ဆို့ဖို့ကူညီနိုင်သည်။ သင်သည်လက်ျာအစားအစာများကိုစားနေကြသည်သေချာရန်သင့်ဆရာဝန်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်နှင့်သင်သင့်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုဤဆေးကိုယူပြီးနေကြသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
4 ။ Orlistat အမှုန့်သောက်သုံးသော
Orlistat အမှုန့်တစ်ဦးဆေးတောင့်အဖြစ်အသုံးပြုပါးစပ်ကြီးနှင့် Orlistat အမှုန့်တစ် nonprescription capsule.The အကြံပြုသောက်သုံးသောတဦးတည်း 120-မီလီဂရမ် (ကဆေးတောင့်) တဦးတည်းအချိန်, သုံးကြိမ်နေ့ဖြစ်၏။ Orlistat အမှုန့်ကိုယူ အစာစားစဉ်သို့မဟုတ်အစာစားပြီးနောက်တစ်နာရီ 1 မှတက်။ အစာစားလွဲချော်နေသည်သို့မဟုတ်အဆီမပါပါဘူးဆိုရင်, သင်သည်သင်၏ထိုး skip လိမ့်မည်။ ဂရုတစိုက်သင့်ရဲ့ဆေးညွှန်းတံဆိပ်ပေါ်တွင်လမ်းညွှန်များသို့မဟုတ်အထုပ်တံဆိပ်ကိုလိုက်နာပါ, သင်နားမလည်ကြဘူးဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုရှင်းပြရန်သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးမေးကြည့်ပါ။ ညွှန်ကြားအဖြစ်အတိအကျ Orlistat အမှုန့်ကိုယူပါ။ ဒါကြောင့်ပိုဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းယူသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမကြာခဏသင့်ဆရာဝန်များကသတ်မှတ်ထားသည့်သို့မဟုတ်အထုပ်အပေါ်ဖော်ပြထားထက်ယူမထားပါနဲ့။
★သင်ကရော် Orlistat အမှုန့်ကိုယူတဲ့အခါမှာ:
•သင်ကိုယ်အလေးချိန် Orlistat အမှုန့်ယူပြီးဖြစ်ကြောင်းနေစဉ်, သင်ပိုမိုထက် 30% ကောင်ဆီဥနှင့်ကြောင့်အစားအစာများကိုရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
•တစ်ဦးဝတ်ပြုဘို့ကိုသာ2သို့မဟုတ်3အောင်စ (55 သို့မဟုတ် 85 ဂရမ်) ကိုစား, အသား, ကြက်ဘဲ (ကြက်သား) သို့မဟုတ်ငါးကိုစားတဲ့အခါ, အသား၏ပိန်ကြုံဖြတ်တောက်မှု ok ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးအစေ့, အသီးအပွနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူ။ nonfat သို့မဟုတ် 1% နို့နှင့်အတူမြေတပြင်လုံး-နို့ထွက်ပစ္စည်းများနေရာမှာအစားထိုးခြင်းနှင့် reduced- သို့မဟုတ်အနိမ့်အဆီနို့ထွက်ပစ္စည်းများ။
•ဗီတာမင် A, D, E, K နှင့် beta-carotene ပါဝင်သောနေ့စဉ် multivitamin ကိုယူ
Orlistat အမှုန့်လုပ်ကွက်အချို့အဆီတွင်ပျော်ဝင်နေသောဗီတာမင်နှင့် beta ကို carotene ၏သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စုပ်ယူ။ သငျသညျ Orlistat အမှုန့်အသုံးပြုတဲ့အခါ သို့ဖြစ်. , ဗီတာမင် A, D, E, K နှင့် beta-carotene ပါဝင်သောနေ့စဉ် multivitamin ယူသင့်ပါတယ်။ ဤအဗီတာမင်ပါရှိသည်တစ် multivitamin ထုတ်ကုန်ကိုရှာဖွေတံဆိပ်ကိုဖတ်ပါ။2နာရီမတိုင်မီသို့မဟုတ်2နာရီ Orlistat အမှုန့်ကိုယူပြီးပြီးနောက်တစ်ရက်တစ်ချိန်က multivitamin ကိုယူ, ဒါမှမဟုတ်အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ multivitamin ယူပါ။
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: Orlistat အမှုန့်ကို ယူ. , Orlistat အမှုန့်, Orlistat အမှုန့်ကိုဝယ်, Orlistat အမှုန့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး.
အဘယ်မှာသားသမီးများ၏လက်လှမ်းမမီထဲကတင်းကျပ်စွာပိတ်ထား, ကွန်တိန်နာ၌ဤဆေးထားပါ။ Orlistat အမှုန့်များ၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲများသောအားဖြင့်သင်ပိုကောင်းတဲ့အခန်းအပူချိန်မှာသိုလှောင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ဝေးပိုလျှံအပူ, (မရေချိုးခန်း၌) အစိုဓာတ်နှင့်အလင်းထဲကချင်ပါတယ်,2နှစ်ပေါင်းဖြစ်ကြသည်။ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးများဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုတစ်ဆေးပညာယူ-ပြန်ပရိုဂရမ်မှတဆင့်အစားအိမ်သာကဆင်းကဒီဆေး flushing ဖြစ်ပါတယ်။
Orlistat အမှုန့်ထဲက★ Cycle
Orlistat အမှုန့်ထိရောက်သောဖြစ်နေ့တိုင်းယူရပါမည်။ ကိုယ်အလေးချိန်ပုံမှန်2ရက်သတ္တပတ်အတွင်းစတင်သည်နှင့်6Orlistat အမှုန့်အဆီဆုံးရှုံးမှုအပေါ်လအတွင်း 12 ရန်အဘို့အနေဆဲဖြစ်သည်။ Orlistat အမှုန့် ထို့နောက် အကယ်. သင်ဤအသစ်အနိမ့်အလေးချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ပြန်လည်ခံရအလေးချိန်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ကူညီပေးဖို့ကူညီပေးပါမည်။
(ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားအတွက်လျော့ချရေးအဖြစ်, သွေးတွင်းသကြားဓာတ်အဆင့်ကိုပုံမှန်နဲ့လက်စထရောအဆင့်ကိုလျှော့ချ) အန္တရာယ်အချက်များအတွက်တိုးတက်မှုများသောအားဖြင့်ကုထုံးစတင် 1 တစ်လအတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိသည် Orlistat အမှုန့်ကုသမှုသင်တန်းကာလအတွင်းထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။
5 ။ Cetilistat အမှုန့်မှုန့်သုံးသပ်မှု
Cetilistat အမှုန့်ပန်ကရိယ lipase တစ်ခု inhibitor, အူထဲမှာ triglyceride ဆင်းချိုးထားတဲ့အင်ဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအင်ဇိုင်းမရှိရင်အစားအသောက်များတွင်ထံမှ triglyceride ကိုစုပ်ယူအခမဲ့ဖက်တီးအက်ဆစ်သို့ hydrolyzed ခံရခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ကြသည်နှင့် undigested ပြန်ထွက်သွားသည်ခံရဖို့ထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေး, လက်ရှိ FDA က-approved မူးယစ်ဆေး Orlistat အမှုန့်မှုန့်ဆင်တူနေစဉ်အတွင်းတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောမော်လီကျူးတည်ဆောက်ပုံကြောင့်ပိုပြီးခံသာဘေးထွက်သက်ရောက်မှုပရိုဖိုင်းရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကအဆင့်2ရုံးတင်စစ်ဆေးနေတဲ့ 612-ရက်သတ္တပတ်ကုသမှုကာလအတွင်းကီလိုဂရမ် / m28 45 မှ2တစ် BMI နှင့်အတူ 12 အဝလွန်, ဆီးချိုဘာသာရပ်များလေ့လာခဲ့သည်။ Cetilistat အမှုန့် 80 နှင့် 120 မီလီဂရမ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ (3.85 ကီလိုဂရမ်နှင့် 4.32 ကီလိုဂရမ် vs. 2.86 ကီလိုဂရမ်အသီးသီး) နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်သိသိသာသာကိုယ်အလေးချိန်ရာထူးတိုး။ Cetilistat အမှုန့်-သွေးဆောင်ကိုယ်အလေးချိန် Orlistat အမှုန့် (3.78 ကီလိုဂရမ်) နှင့်အတူအောင်မြင်အလေးချိန်အရှုံးဆင်တူခဲ့သည်။ Cetilistat အမှုန့်မှုန့်ကောင်းကောင်းဒဏ်ခံခဲ့မှုကြောင့်ဆိုးရွားသောယင်းရလဒ်များအရအိပ်ယာထက်ဖြစ်ရပ်များနှင့် Orlistat အမှုန့်အုပ်စုများမှနည်းပါးလာမှရပ်စဲပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါ Orlistat အမှုန့်မှုန့်အုပ်စုပြတ်တောက်သည့် 120 မီလီဂရမ် Cetilistat အမှုန့်နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုများအတွက်ထက်သိသိသာသာဆိုးရွားခဲ့တာနှင့်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များမှလုံးဝကြောင့်ခဲ့ကြောင်းပေးထား, Cetilistat အမှုန့်အလေးချိန်အရှုံးရရှိများအတွက်ဦးစားပေး lipase inhibitor ဖြစ်လာပေမည်။ Cetilistat အမှုန့်မှုန့်အဆင့်3စမ်းသပ်မှုတွေဂျပန်တွင်တိုးတက်မှုအတွက်လက်ရှိဖြစ်ကြသည်။
6 ။ Orlistat အမှုန့်မှုန့်သုံးသပ်မှု
Orlistat အမှုန့်မှုန့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး, လက်တွေ့လေ့လာမှုများ, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကလူကအကြောင်းပြောပါရန်ရှိသည်တစ်ခုသတိထားထည့်သွင်းစဉ်းစားဖြစ်ရှိလိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ FDA က Orlistat အမှုန့်မှုန့်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်နိုင်သောလေးနက်ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း၏သတိပေးစာကိုစလှေတျတျောမူပြီ။ ထိုအရပ်၌များစွာသောဖြစ်နိုင်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းဖွင့်, များပြားဖောက်သည်သူတို့ဆိုးကျိုးများကြုံတွေ့ဖော်ပြထားခြင်းကိုပြု၏။ ဒါ့အပြင်လက်တွေ့လေ့လာမှုများကြောင့်တစ်နှစ်အတွက်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုအထိ6ပေါင်သာထိရောက်သောဖြစ်ပြပါပြီ။ ဒါဟာဘယ်နေရာမှာသိသာရလဒ်များကိုဖြစ်ရှိဘို့လိုအပ်သည့်ပမာဏဖြစ်သည်။ သို့သော်များစွာသော custoemrs အလေးချိန်အတွက်မဆိုပြောင်းလဲမှုကိုမြင်ရဖို့မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။
၎င်း၏သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများ, အစွမ်းထက်ကိုယ်အလေးချိန်များနှင့်ဖောက်သည်ခွင့်ပြုချက်နှုန်းသည်ဤလမ်းအဖြစ် rated ခဲ့သော Sletrokor လို့ခေါ်တဲ့ 2016 အကောင်းဆုံးအစားအစာဆေးလုံးရှိပါတယ်။ အတော်များများသည်အသုံးပြုသူများကကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အတူကူညီမှုအတွက်လုံခြုံပြီးထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်ဖော်ပြထားခြင်း။ ဒါဟာအစအစာစားချင်စိတ်လျှော့ချရေး, တိုးပွားလာဇီဝြဖစ်, စိတ်ဓါတ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီခြင်းနှင့်အခြားအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်ကောင်းသောဖြစ်ပြနေပါတယ်။ သင်ဒီမှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဒီအစားအစာဆေးလုံးအကြောင်းကိုအထဲကရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
Sletrokor ကိုလည်းအပြည့်အဝ 30 နေ့ကပိုက်ဆံပြန်အာမခံချက်အားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုနေပါတယ်။ သင်တစ်ဦးပြန်လာအချိန်စာရင်းချင်ဆိုအကြောင်းပြချက်လျှင်သင်မေးလျှင်အဘယ်သူမျှမမေးခွန်းများကိုအတူဒါလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Sletrokor အကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။
7 ။ Cetilistat အမှုန့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ
အမြားဆုံးအစီရင်ခံတင်ပြ Cetilistat အမှုန့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ အဆီပြန်ထိုင်ခုံလုပ်ဖို့, ဝမ်းလျှော, fecal incontinence ဝမ်း, မကြာခဏအူသိမ်အူလှုပ်ရှားမှုများနှင့်လေဖြစ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်, အဝလွန်ဆီးချိုလူနာအတွက် glycosylated ဟေမိုဂလိုဘင် (HbA1c) ၏အဆင့်ဆင့်ကိုလည်းများကိုသိသိသာသာလျှော့ချခဲ့သည်။ Cetilistat အမှုန့်မှုန့် Orlistat အမှုန့်မှုန့်ထက်နိမ့်တစ်ခုဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူအဓိကအားအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းသဘောသဘာဝ (steatorrhea) ၏, ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များကိုအလယ်အလတ်မှအပျော့စားပြသခဲ့သည်။
8 ။ Orlistat အမှုန့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ
Orlistat အမှုန့်နှင့်ဆက်စပ်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာအတော်များများဖြစ်ကောင်း, Fats ၏ non-စုပ်ယူမှုကြောင့်အစာခြေလက္ခဏာတွေပါပဲ။ အများဆုံးဖြစ်ပေါ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမကြာခဏဖြည့်စွက်တာသီတင်းပတ်၏ပထမဦးဆုံးစုံတွဲကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ရာအူသိမ်အူအချိန်လေးအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသွားစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ကဆေးဝါးအပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့တစျခုလုံးကိုကြာချိန်များအတွက်ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးက, D, E နှင့် K သည်နှင့်တူကောင်ဆီဥတွင်ပျော်ဝင်နေသောဗီတာမင်ဓာတ်•လျှော့ချစုပ်ယူ
•တိုးမြှင့်အူသိမ်အူလှုပ်ရှားမှုများ, မြည်းကြိုးကိုဖြည်ထိုင်ခုံလုပ်ဖို့, ဝမ်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း
အဆိုပါ FDA ကလည်းအချို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏ကြိမ်နှုန်းအဖြစ်သတင်းအချက်အလက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ ဆေးညွှန်းအစှမျးသတ်တိ Orlistat အမှုန့်မှုန့်ကိုယူပြီး၏ပထမနှစ်တွင်:
•အသုံးပြုသူ 26.6% အဆီပြန်အစက်အပြောက်ကဖော်ပြခဲ့သည်။
• 23.9% ဥတုနှင့်အတူဓာတ်ငွေ့ကဖော်ပြခဲ့သည်။
• 22.1% အရေးပေါ်အူသိမ်အူလှုပ်ရှားမှုများခံစားခဲ့ရသညျ။
• 20% ဖက်တီးသို့မဟုတ်ဆီပြန်ထိုင်ခုံလုပ်ဖို့ရှိခဲ့ပါတယ်။
• 10.8% အူသိမ်အူလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတိုးလာအရေအတွက်ကရှိခဲ့ပါတယ်။
• 7.7% fecal incontinence ဝမ်းမခံစားခဲ့ရသည်။
Orlistat အမှုန့်သုံးစွဲသူ 8.8% အဘို့, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသူတို့ကိုအသုံးပြုမှုရပ်တန့်ရန်အတွက်လုံလောက်သောအလေးအနက်ရှိကြ၏။ ပျော့သို့မဟုတ်အလယ်အလတ်အပြင် Orlistat အမှုန့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေပိုပြီးပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ နောက်တဖန်ပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရသူကိုအသုံးပြုသူများအသုံးပြုမှုကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်းနှင့်၎င်းတို့၏ဆရာဝန်ကိုဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။
9 ။ Cetilistat အမှုန့်မှုန့်သည် သာ. ကောင်း၏သည်းခံစိတ်သန်း Orlistat အမှုန့်မှုန့်
Budapest, ဟန်ဂေရီ - ဧပြီလ 24, 2007 - ပိုကောင်းသည်းခံစိတ်သရုပ်ပြနေစဉ် Cetilistat အမှုန့်တစ်ဝတ္ထုအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်း lipase inhibitor နှစ်ခုအဆင့်နှင့်အညီ, Orlistat အမှုန့်မှုန့်သည်အခြား lipase inhibitor အဖြစ်အဝလွန်ခြင်း၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်၎င်း၏ comorbidities ၌ရှိသကဲ့သို့ထိရောက်သောဖြစ်ပေါ်လာသော2Random, ကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled, 12-ရက်သတ္တပတ်လေ့လာမှုများ။
"Lipase တားစီးအဝလွန်လူနာနှင့်ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူအဝလွန်လူနာအတွက်ထိရောက်မှုသက်သေပြနေပါတယ်" ဟုပတေရုသ Kopelman, ဌာနမှူး, ကျန်းမာရေး၏ဒြေ, အ Cetilistat အမှုန့်ဥရောပလေ့လာမှုကိုယ်စားနှစ်ခုလေ့လာမှုများတင်ဆက်သူကိုအရှေ့ Anglia, Norwich, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏တက္ကသိုလ်ကဆိုပါတယ် ဤနေရာတွင်အဝလွန်ခြင်းအပေါ် 15th ဥရောပကွန်ဂရက် (ECO) မှာ Group မှ။
ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှု၏အသုံးပြုမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး Cetilistat အမှုန့်မှုန့် တစ်ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်းဥရောပတစ်လျှောက်လုံးစင်တာများအတွက် (BMI)> 372 အတူ 30 အတွက်အဝလွန်လူနာ။ အားလုံးလူနာလေ့လာမှုတစ်လျှောက်လုံးအထူးကြပ်မတ် dietetic အကြံပေးခြင်းလက်ခံရရှိနှင့်သူတို့၏အလေးချိန်-ထိန်းသိမ်းတဲ့အစားအစာကိုအောက်တွင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 500 kcals ဖြစ်တွက်ချက်ခဲ့တဲ့သတ်မှတ်ထားသောအစားအစာကိုလောင်လေ၏။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လူနာသုံးကြိမ်နေ့စဉ်, အစာစားခြိမှာ 60, 120, ဒါမှမဟုတ် 240 မီလီဂရမ် Cetilistat မှုန့်, ဒါမှမဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာပေးထားခဲ့ကြသည်။ 12 နှင့်အတူအောင်မြင်အလေးချိန်တစ် 3.5-ကီလိုဂရမ်လျှော့ချရေးရလဒ်များအရအိပ်ယာ (P <.120) သာရှိပြီးပြည်ပမှနေ့စဉ် Cetilistat အမှုန့်မှုန့်ကိုသုံးကြိမ် mg နှင့်အတူသိသိသာသာကိုယ်အလေးချိန်, 05 ရက်သတ္တပတ်မှာအားလုံးကုသမှုအုပ်စုများအတွက်အောင်မြင်ခဲ့သည်။
"Cetilistat အမှုန့်မှုန့်လေ့လာမှု 12 ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန် inducing အတွက်ထိရောက်သောခဲ့သည်" ဟုဒေါက်တာ Kopelman ဧပြီလ 23rd အပေါ်တစ်ဦးတင်ပြချက်ကပြောသည်။ "အပြင်, ခါးလုံးပတ်အတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချရှိခဲ့သည်။ " ဟုဒေါက်တာ Kopelman အားဖြင့်တင်ပြဒုတိယလေ့လာမှုမှာသုတေသီတွေက Metformin ဆေးဟာလည်းယူပြီးသူအမျိုးအစား 612 ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူ2အဝလွန်ဘာသာရပ်များစာရင်းသွင်း။ လူနာအတော်များများဟာုင်အပေါ်လည်း ရှိ. , အကြောင်းတတိယလည်း antihypertensive ဆေးယူပြီးခဲ့ကြသည်။
ယခင်လေ့လာမှု၌ရှိသကဲ့သို့, လူနာတစ်ဦး hypocaloric အစားအစာနှင့် Cetilistat အမှုန့် (40, 80, ဒါမှမဟုတ် 120 မီလီဂရမ်) ၏သုံးခုကွဲပြားခြားနားသောဆေးများ၏တဦးတည်းဖြစ်စေ, ရလဒ်များအရအိပ်ယာကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးစတုတ္ထလေ့လာမှုအုပ်စုကိုနေ့စဉ် Orlistat အမှုန့်မှုန့် 120 အကြိမ်မီလီဂရမ်3မှ randomized ခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Kopelman အကြောင်းကို 35 ၎င်းတို့၏ကနဦးခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏% သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအလေးချိန်အရှုံးရရှိထိုးအမြင့်ဆုံး Cetilistat အမှုန့်မှုန့်ပေါ်ဘာသာရပ်များ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 5% နှင့်အတူသိသိသာသာကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချအားလုံးကုသမှုအုပ်စုများအတွက်အောင်မြင်ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, 1 ရက်သတ္တပတ်ကျော် glycosilated ဟေမိုဂလိုဘင် (HbA12c) တွင်ကစာရင်းအင်းသိသိသာသာလျှော့ချရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါထိရောက်မှုဒေတာ Cetilistat အမှုန့်မှုန့်နှင့် Orlistat အမှုန့်မှုန့်များအကြားနှိုင်းယှဉ်ကြပေမဲ့, စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာကွဲပြားခြားနားမှုဒေါက်တာ Kopelman သည်နှင့်အညီ, သူတို့ရဲ့သည်းခံစိတ် profile များကိုနှင့်စပ်လျဉ်းသောဤနှစ်ခုမူးယစ်ဆေးအကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
အဓိကအားဖြင့်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်း - - ကုသမှုပြတ်တောက်မှဦးဆောင်သည့် Cetilistat အမှုန့်မှုန့်အုပ်စုထက်ယေဘုယျအား Orlistat အမှုန့်မှုန့်နဲ့ကုသလူနာနီးပါးနှစ်ကြိမ်အဖြစ်အများအပြားလေးနက်ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များရှိခဲ့သည်။ ပြတ်တောက်မှဦးဆောင်ပြင်းထန်ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များ၏နှုန်းရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုတစ်စုနှင့်ထိုလက်ခံရရှိ Cetilistat အမှုန့်များအကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ ဤအရလဒ်များကို၏အခြေခံတွင်ဒေါက်တာ Kopelman Cetilistat အမှုန့်တစ်ဦးအဆင်သင့်သည်းခံစိတ်ပရိုဖိုင်းရှိကြောင်းနိဂုံးချုပ်များနှင့်ကအဝလွန်ခြင်း၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်၎င်း၏ comorbidities အတွက်လုံခြုံပြီးထိရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။
10 ။ အွန်လိုင်း Anti-အဝလွန်ခြင်းအမှုန့်ကိုဝယ်
သင်တို့သည်လည်းအွန်လိုင်း Anti-အဝလွန်ခြင်းအမှုန့်ကိုဝယ်နိုင်, သို့သော်ဝယ်ယူတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောအရင်းအမြစ်နှင့်ဆန့်ကျင်အဝလွန်ခြင်းအမှုန့်မှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းခြင်းမှပြုမိကြောင်းသေချာပါစေ။ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏တရားမဝင်ဗားရှင်းမြင့်မားအန္တရာယ်မကင်းဖြစ်ကြပြီးသင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ယခုသင်အွန်လိုင်း Anti-အဝလွန်ခြင်းအမှုန့်ကိုဝယ်နိုင်အောင်လည်းသင်, သင်ကယုံကြည်စိတ်ချရသောအရင်းအမြစ်အကြံပြုရန်သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးကိုပံ့ပိုးပေးသူကိုမေးလို့ရပါတယ်။
ဤတွင်အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသော recommendation- င်AASraw, ဆန့်ကျင်အဝလွန်ခြင်း powder.AASraw ထောက်ပံ့ရေးအရည်အသွေးမြင့် Anti-အဝလွန်ခြင်းအမှုန့်နှင့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ် 98% ထက်လျော့နည်းမဟုတ်ပါဘူးပေးအပ်မှာအဓိက။ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် AASraw ထံမှအထူးအားသာချက်:
1 ။ အနိမ့်စက်ရုံအဘိုးနှင့်ကုန်ကြမ်းအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကို steroids
ကျနော်တို့> 98% အားလုံးမှုန်၏အမြင့်ဆုံးသန့်ရှင်းစင်ကြယ်အာမခံ, ငါတို့သည်ထုတ်လုပ်သူမဟုတ်လက်လီအရောင်းဆိုင်ဖြစ်သောကြောင့်, ဒီမှာအားလုံးကုန်ပစ္စည်းများနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်တိုက်ရိုက်ရောင်းချကြသည်။
2 ။ Steroid တစ်မျိုးကုန်ကြမ်းအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံပေးပို့
1) ကှကျခြေရာခံခြင်းအရေအတွက်ကိုပေးပြီးတော့, ငွေပေးချေပြီးနောက် 24 နာရီအတွင်းထုတ်ကိုစလှေတျနိုငျသညျ။
2) Rich အားလုံးဆန့်ကျင်အဝလွန်ခြင်းမှုန့်ပို့ဆောင်သူအာမခံချက်လုံလုံခြုံခြုံနဲ့သတိပညာရှိတင်ပို့ခဲ့ရတယျ။ အမျိုးမျိုးသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများ, သင်၏တစ်ဦးချင်းစီလိပ်စာအဆိုအရရှေးခယျြမှုကအကောင်းဆုံးတည်း။
ဘေးကင်းလုံခြုံပေးပို့၏ 3) မြင့်အောင်မြင်စွာမှုနှုန်း 98% အထက်ဖြစ်ပါတယ်။
အီးယူနိုင်ငံများသို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ 4-3 အလုပ်လုပ်ရက်နှင့် 5-4 အလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်း: 6) Anti-အဝလွန်ခြင်းအမှုန့်အဘို့ Delivery အချိန်။
3 ။ AASraw ကမ္ဘာအနှံ့ clients များရှိ
1) Professional ကဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကြွယ်ဝတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဖောက်သည်လွယ်ကူမှာခံစားရပါစေ, Steroid တစ်မျိုးပစ္စည်းများနှင့်အစာရှောင်ပေးပို့အမျိုးမျိုးတို့ကို၏လုံလောက်သောစတော့ရှယ်ယာဟာသူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒဖြည့်ဆည်း။
2) အသုံးပြုသူရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တန်ဖိုးထားပါလိမ့်မည်, သင့်အကြံပြုချက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတိုးတက်စေရန်ကျွန်တော်တို့ကို Guilds ပါလိမ့်မယ်, ထိုသို့ client အားလုံးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။
3) AASraw အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ Steroid တစ်မျိုးကုန်ကြမ်းအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းတကောင်းသောဝန်ဆောင်မှုများနှင့်လုံခြုံ & မြန်ဆန်စွာရေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
AASraw ထံမှ anti-အဝလွန်ခြင်းအမှုန့်
anti-အဝလွန်ခြင်းအမှုန့် CAS.NO ဆေးတခါသောက် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည် မှတ်ချက်များကိုကြယ်ပွင့်
Sibutramine HCL 84485-00-7 sibutramine Hydrochloride ၏တိုက်ရိုက်အသုံးပြုခြင်း, တစ်ဦးချင်းစီဆေးတောင့်သောအကြောင်းအရာများကို 10-30mg ။ Meridia ★★★★★
Lorcaserin Hydrochloride 1431697-94-7 10 တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်နှုတ် MG ။ Belviq ★★★
Orlistat အမှုန့် 96829-58-2 တနေ့သုံးကြိမ်အဆီပါဝင်တဲ့အသီးအသီးတွင်အဓိကမုန့်ညက်တ 120-မီလီဂရမ်ဆေးတောင့်။ Xenical ★★★★
Cetilistat အမှုန့် 282526-98-1 နှုတ်အုပ်ချုပ်မှုများအတွက် 60mg ခှနျအားဗလတောင်။ Cetislim, setilista ။ ★★
Syneprine HCL 5985-28-4 50-100mg နေ့ရက်တိုင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မှီ 30-40 မိနစ်။ Synephrine Hydrochloride ★★★
Cetilistat (Oblean) အမှုန့် ကိုယ်အလေးချိန်-တစ်ဦးကိုသင်သိသင့်အံ့သြဖွယ်အဆီဆုံးရှုံးမှုမူးယစ်ဆေးများအတွက်သဘာဝအရင်းအမြစ် Orlistat အမှုန့် !!! သငျသညျအဆီဆုံးရှုံးမှုများအတွက် Orlistat အမှုန့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိကျွမ်းရပါမည်အရာအားလုံးကို
Tags: Cetilistat အမှုန့်ကိုဝယ်, Orlistat အမှုန့်ကိုဝယ်, Cetilistat အမှုန့်, Orlistat အမှုန့်
4495 Views စာ
Avanafil အမှုန့် ED ကုသမှုများအတွက် Viagra နှင့် Cialis အမှုန့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Yohimbine အမှုန့်: သောက်သုံးသော, အကျိုးကျေးဇူးများ, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ, ပြန်သုံးသပ်ချက်များ